NGOs call on parliament to consult on draft privacy law amendment – နိုငျငံသားမြား၏ ပုဂ်ဂိုလျဆိုငျရာလှတျလပျမှုနှငျ့ ပုဂ်ဂိုလျဆိုငျရာလုံခွုံမှုကိုကာကှယျပေးသညျ့ ဥပဒအေား ပွငျဆငျ သညျ့ ဥပဒကွေမျးနှငျ့စပျလဉျြး၍ပွညျထောငျစုလှတျတျောနာယက ထံသို့ အရပျဖကျ အဖှဲ့အစညျးမြား၏ အိတျဖှငျ့ပေးစာ။ – Free Expression Myanmar
Mar 06, 2019 by Coordinator	in News သတငျး
The Draft Amendment Bill of the Law Protecting the Privacy and Security of Citizens was published on the Union Parliament website on 25 February 2019, in order to inform the public.
We welcome the government’s attempt to amend the privacy law. Since its adoption in March 2017, we have consistently called upon on the government to address the privacy law’s weaknesses and fully protect the right to privacy.
Civil society believe that the privacy law should be amended to promote and protect individuals’ rights. For example, Article 8(f) isacriminal defamation provision that states, “No one shall unlawfully … act in any way to slander or harm their reputation,” with the punishment of imprisonment. This violates human rights because:
It criminalises expression that informs people about others’ wrongdoing, human rights violations, or corruption, and can be easily misused by powerful people to criminalise others for legitimate expression
It is unnecessary duplication as defamation is already included in the Penal Code and four other laws
Criminal defamation is undemocratic and should not be found in democracies
As well as Article 8(f), civil society have identified many other important provisions that need to be amended.
We therefore urge government and parliament:
Do not adopt the Amendment Bill quickly
Review the impact of the current law
Take time to conductawider and meaningful public consultation nationwide and listen carefully to the recommendations of civil society.
Synergy Social Harmony Organisation
၁။ နိုငျငံသားမြား၏ ပုဂ်ဂိုလျဆိုငျရာလှတျလပျမှုနှငျ့ ပုဂ်ဂိုလျဆိုငျရာလုံခွုံမှုကိုကာကှယျပေးသညျ့ ဥပဒအေား ပွငျဆငျ သညျ့ ဥပဒမေူကွမျးကို ၂၅ ရကျ၊ ဖဖေျေါဝါရီလ၊ ၂၀၁၉ ခုနှဈတှငျ ပွညျထောငျစုလှတျတျောဝကျဘျဆိုကျ၌ အမြားပွညျသူတို့ လလေ့ာသိရှိနိုငျရနျ အလို့ငှာ ထုတျပွနျထားခဲ့ပါသညျ။ ၂၀၁၇ ခုနှဈ၊ မတျလတှငျ အတညျပွု ပွဌာနျးခဲ့သော ယငျးဥပဒသေညျ လူ့အခှငျ့အရေးဆိုငျရာအားနညျးခကျြမြားရှိနသေဖွငျ့ ပွနျလညျပွငျဆငျသငျ့ ကွောငျး ကြှနျုပျတို့ အရပျဖကျအဖှဲ့အစညျးမြားမှ အကွံပွုခဲ့ရာ၊ ယခုပွနျလညျပွငျဆငျရနျ ကွိုးပမျးလာမှုအပျေါ ကွိုဆိုပါသညျ။
၂။ ပွငျဆငျသညျ့ဥပဒကွေမျးကို ကြှနျုပျတို့အရပျဖကျအဖှဲ့အစညျးမြားက လလေ့ာရာတှငျ လူတဈဦး၏ အခွခေံရ ပိုငျခှငျ့ကို တိုးမွှငျ့ပေးရနျနှငျ့ အကာကှယျပေးနိုငျရနျအတှကျ လကျရှိဥပဒပွေဌာနျးခကျြမြားအပျေါ ပွငျဆငျရနျ နှငျ့ ဖွညျ့စှကျရနျအခကျြမြားကိုတှရှေိ့ရသညျ။ ဥပမာအားဖွငျ့- ဥပဒေ၏ အခနျး (၄)၊ ပုဒျမ ၈(စ)ပါ “လူတဈဦး၏ ဂုဏျသိက်ခာနှငျ့ ထငျပျေါကြျောကွားမှုကို ပုတျခတျခွငျး သို့မဟုတျ ထိခိုကျစရေနျ တဈနညျးနညျးဖွငျ့ ဆောငျရှကျခွငျးမပွုရ။” ဟူသညျ့အခကျြသညျ (၁) ထငျရှားကြျောကွားသညျ့ လူတဈဦးမှပွုလုပျသော မှားယှငျးမှု မြား၊ လူ့အခှငျ့အရေးခြိုးဖောကျမှုမြား၊ အကငျြ့ပကျြခွစားမှုမြားအကွောငျး အမြားပွညျသူသိရှိစရေနျ ရေးသား ထုတျဖျောပွောဆိုခွငျးကို ရာဇဝတျပွဈဒဏျသငျ့စခွေငျး၊ သို့မဟုတျ ရာထူးအာဏာရှိသောလူပုဂ်ဂိုလျမှ လှတျလပျ စှာရေးသားထုတျဖျောပွောဆိုခှငျ့ကို ကငျြ့သုံးသညျ့ ပွညျသူအား ဥပဒကေို အသုံးပွုကာ လှယျကူစှာတရား စှဲဆိုနိုငျခွငျး၊ (၂) မွနျမာနိုငျငံရှိ ရာဇသတျကွီးဥပဒအေပါအဝငျ အခွားဥပဒမြေားတှငျ ရှိနှငျ့ပွီး ဖွဈသော ရာဇဝတျပွဈမှုဆိုငျရာ အသရဖေကျြမှုပုဒျမကို မလိုအပျဘဲ ထပျမံပွဌာနျးထားခွငျး နှငျ့ (၃) ဒီမိုကရစေီ စနဈ၏ ဆနျ့ကငျြဘကျလားရာဖွဈသညျ့ အသရဖေကျြမှုအား ရာဇဝတျမှုပွုထားခွငျး စသညျ့ အခကျြတို့ကွောငျ့ ဥပဒေ ပါပွဌာနျးခကျြမြားသညျ လူ့အခှငျ့အရေးအား ခြိုးဖောကျလကျြရှိနသေညျ။
၃။ ဥပဒပေါ ပုဒျမ ၈(စ) အပွငျ အခွားအရေးကွီးပွငျဆငျသငျ့သညျ့ အခကျြမြားလညျး ခိုငျခိုငျမာမာရှိနပွေီး၊ ယငျး အခကျြမြားကို ကြှနျုပျတို့အရပျဖကျအဖှဲ့အစညျးမြားမှ Legal Analysis (ဥပဒဆေိုငျရာ ခှဲခွမျးစိတျဖွာလလေ့ာသုံး သပျခကျြ) ပွုလုပျထားပါသညျ။
၄။ ထို့ကွောငျ့ ပွငျဆငျခကျြဥပဒကွေမျးအား -
(၁) ဆောလငျြစှာ အတညျပွုပွဌာနျးခွငျးမပွုသေးဘဲ၊
(၂) လကျရှိဥပဒေ၏ သကျရောကျမှုအား ပွနျလညျသုံးသပျခွငျး (Review) ပွုလုပျပါရနျ နှငျ့၊
(၃) အစိုးရက ဦးဆောငျပွီး အဓိပ်ပါယျပွညျ့ဝသော အမြားပွညျသူကွားဆှေးနှေးခွငျး (Public Consulta-tion) မြားကို အခြိနျလုံလောကျစှာယူကာ ပွုလုပျပွီး၊ နိုငျငံအဝှမျးရှိ ပွညျသူမြား၊ အရပျဖကျအဖှဲ့အစညျးမြား၏ အကွံပွုခကျြ ကို လလေ့ာနားထောငျပေးပါရနျ လေးနကျစှာ တောငျးဆိုလိုကျရပါသညျ။
၁။ Action Committee for Democratic Development
၂။ Assistance Association for Political Prisoners
၃။ Free Expression Myanmar
၄။ Generation Wave
၅။ Myan ICT for Development Organization
(ဖှံ့ဖွိုးမှုအတှကျ “မွနျ” အိုငျစီတီအဖှဲ့)
၆။ Myanmar Women Journalists Society
၇။ New Myanmar Foundation
၈။ Protection Committee for Myanmar Journalists
၉။ Synergy Social Harmony Organization
၁၀။ Progressive Voice
၁။ နိုင်ငံသားများ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာလွတ်လပ်မှုနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာလုံခြုံမှုကိုကာကွယ်ပေးသည့် ဥပဒေအား ပြင်ဆင် သည့် ဥပဒေမူကြမ်းကို ၂၅ ရက်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဝက်ဘ်ဆိုက်၌ အများပြည်သူတို့ လေ့လာသိရှိနိုင်ရန် အလို့ငှာ ထုတ်ပြန်ထားခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မတ်လတွင် အတည်ပြု ပြဌာန်းခဲ့သော ယင်းဥပဒေသည် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာအားနည်းချက်များရှိနေသဖြင့် ပြန်လည်ပြင်ဆင်သင့် ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများမှ အကြံပြုခဲ့ရာ၊ ယခုပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန် ကြိုးပမ်းလာမှုအပေါ် ကြိုဆိုပါသည်။
၂။ ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေကြမ်းကို ကျွန်ုပ်တို့အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများက လေ့လာရာတွင် လူတစ်ဦး၏ အခြေခံရ ပိုင်ခွင့်ကို တိုးမြှင့်ပေးရန်နှင့် အကာကွယ်ပေးနိုင်ရန်အတွက် လက်ရှိဥပဒေပြဌာန်းချက်များအပေါ် ပြင်ဆင်ရန် နှင့် ဖြည့်စွက်ရန်အချက်များကိုတွေ့ရှိရသည်။ ဥပမာအားဖြင့်- ဥပဒေ၏ အခန်း (၄)၊ ပုဒ်မ ၈(စ)ပါ “လူတစ်ဦး၏ ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုကို ပုတ်ခတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ထိခိုက်စေရန် တစ်နည်းနည်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုရ။” ဟူသည့်အချက်သည် (၁) ထင်ရှားကျော်ကြားသည့် လူတစ်ဦးမှပြုလုပ်သော မှားယွင်းမှု များ၊ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများ၊ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများအကြောင်း အများပြည်သူသိရှိစေရန် ရေးသား ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းကို ရာဇဝတ်ပြစ်ဒဏ်သင့်စေခြင်း၊ သို့မဟုတ် ရာထူးအာဏာရှိသောလူပုဂ္ဂိုလ်မှ လွတ်လပ် စွာရေးသားထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ကို ကျင့်သုံးသည့် ပြည်သူအား ဥပဒေကို အသုံးပြုကာ လွယ်ကူစွာတရား စွဲဆိုနိုင်ခြင်း၊ (၂) မြန်မာနိုင်ငံရှိ ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေအပါအဝင် အခြားဥပဒေများတွင် ရှိနှင့်ပြီး ဖြစ်သော ရာဇဝတ်ပြစ်မှုဆိုင်ရာ အသရေဖျက်မှုပုဒ်မကို မလိုအပ်ဘဲ ထပ်မံပြဌာန်းထားခြင်း နှင့် (၃) ဒီမိုကရေစီ စနစ်၏ ဆန့်ကျင်ဘက်လားရာဖြစ်သည့် အသရေဖျက်မှုအား ရာဇဝတ်မှုပြုထားခြင်း စသည့် အချက်တို့ကြောင့် ဥပဒေ ပါပြဌာန်းချက်များသည် လူ့အခွင့်အရေးအား ချိုးဖောက်လျက်ရှိနေသည်။
၃။ ဥပဒေပါ ပုဒ်မ ၈(စ) အပြင် အခြားအရေးကြီးပြင်ဆင်သင့်သည့် အချက်များလည်း ခိုင်ခိုင်မာမာရှိနေပြီး၊ ယင်း အချက်များကို ကျွန်ုပ်တို့အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများမှ Legal Analysis (ဥပဒေဆိုင်ရာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာသုံး သပ်ချက်) ပြုလုပ်ထားပါသည်။
၄။ ထို့ကြောင့် ပြင်ဆင်ချက်ဥပဒေကြမ်းအား -
(၁) ဆောလျင်စွာ အတည်ပြုပြဌာန်းခြင်းမပြုသေးဘဲ၊
(၂) လက်ရှိဥပဒေ၏ သက်ရောက်မှုအား ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း (Review) ပြုလုပ်ပါရန် နှင့်၊
(၃) အစိုးရက ဦးဆောင်ပြီး အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝသော အများပြည်သူကြားဆွေးနွေးခြင်း (Public Consulta-tion) များကို အချိန်လုံလောက်စွာယူကာ ပြုလုပ်ပြီး၊ နိုင်ငံအဝှမ်းရှိ ပြည်သူများ၊ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၏ အကြံပြုချက် ကို လေ့လာနားထောင်ပေးပါရန် လေးနက်စွာ တောင်းဆိုလိုက်ရပါသည်။
၁။ Action Committee for Democratic Development (ဒီမိုကရေစီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုကော်မတီ)
(ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် “မြန်” အိုင်စီတီအဖွဲ့)
Read FEM's analysis of the Law Protecting the Privacy and Security of Citizens >>
Law Protecting the Privacy and Security of Citizens (English - on external MCRB website)
Tagged with: Defamation အသရဖေကျြမှု, Draft law, Law Protecting the Privacy and Security of Citizens, Privacy